လူမိုက်ကြီး လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်နှင့် သူ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် (ဖြစ်ရပ်မှန်) (စ/ဆုံး) - Barnyar Barnyar
လူမိုက်ကြီး လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်နှင့် သူ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင် (ဖြစ်ရပ်မှန်) (စ/ဆုံး)
October 4, 2021 KNOWLEDGE 0
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောက မှာ ထွက်ပေါ် ခဲ့တဲ့ လူမိုက် တစ်ရာ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို လူကြိုက် အတော်များခဲ့ ပါတယ်..။ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါ က ရန်ကုန်မြို့မှာ တကယ်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လူမိုက်ကြီး လမ်းမတော် ဦးဖိုးတုတ် ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်း ကို ရိုက်ကူး ထားတယ် လို့လည်း ပြောနေ ဆိုနေတာတွေ ကြားခဲ့ဖူး ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဒီဇာတ်လမ်းခွေ ကို ကြည့်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ လမ်းမတော် ဖိုးတေ ဇာတ်လမ်း ဟာ သမိုင်း အချက်အလက် အရ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ဇာတ်လမ်းအစစ် အမှန် လုံးဝ မဟုတ်ဘူး သိလိုက် ရပါ တယ်..။အဲဒီ ဇာတ်ကားကြည့်ပြီး တဲ့ လူတော်တော်များများ ကတော့ ဒါဟာ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် သမိုင်း အမှန်ပဲ လို့ ထင်နေကြတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ဒီသမိုင်းကြောင်း ကို ရေးသား ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်
လူမိုက် တစ်ယောက်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ကို မင်းက ဘာလို့ ဒီလောက် ရှင်းချက်တွေ ထုတ်နေတာ လဲဆိုပြီး မေးလာ သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်..။ ကျွန်တော်ရှင်းပါ့မယ်။
ဦးဖိုးတုတ် ဟာ ကိုလိုနီခေတ် မှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ပြိုင်ဘက် မရှိ နာမည် အကျော်ကြားဆုံး မြန်မာ လူမျိုး လူမိုက် တစ်ဦးပါ။
ယို့ယွင်းနေတဲ့ ကိုလိုနီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် နဲ့အတူ လူမျိုးခြား လူမိုက်တွေ ကြီးစိုးနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ မှာ လူမျိုးခြား မိုက်တွေကို နှိပ်ကွပ် ခဲ့ပြီး မြန်မာတွေ ဘက်ကရပ်တည်ပေး ခဲ့တဲ့ မြန်မာ လူမိုက်ကြီး ပါ ။
မခံချင် စိတ်ကြောင့် အသက်ငယ်ငယ် မှာ လူဆိုး လူမိုက်ဖြစ်ခဲ့ ရပေမယ့် ဦးဖိုး တုတ်ဟာ လူယုတ်မာ တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး..။
ခေတ်ရဲ့ သားကောင် အဖြစ် လူဆိုး လူမိုက်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ လမ်းမတော် ဦးဖိုးတုတ်ရဲ့ တစ်ခြား မျက်နှာတစ်ဖက် မှာ ရှိနေတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ လွတ်လပ်ရေး ကိုမြတ်နိုးစိတ် ဆိုတဲ့ ဇာတိမာန်လေး ကို တွြေ့ မင်စေ ချင်လို့ ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး သမိုင်းအချက်အလက် အမှားတွေကို အမှန်လို့ မထင်စေချင်လို့ ဒီစာ ကို ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ဆိုတဲ့ လူမိုက်ကြီး ဟာ ဟိုင်နန်ကျွန်း မှာ စစ်ပညာ သင်ကြားဖို့ သွားခဲ့တဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ် အတွက် ငွေကြေး အများဆုံး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်းမှာ မထင်ရှားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်လေးတွေကို ပေါ်လွင်စေချင် တဲ့ စေတနာလည်းဖြစ်ပါတယ်..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ဆိုတာ
ဦးကျော်ဟိန်း ရိုက်ခဲ့ တဲ့ လမ်းမတော် ဖိုးတေ ရုပ်ရှင် ထဲကလို ဖိုးတုတ် ဟာ ကုန်ထမ်း သမားတစ်ယောက် မဟုတ် သလို ဖိုးတုတ်ရဲ့ လူမိုက် ဘ၀ ဟာ အစပြုခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး ။
ဖိုးတုတ် ရဲ့ မိခင် ကြီးဒေါ်ချစ်ပု ဟာ ရန်ကုန်မြို့ (၁၄)လမ်းမှာ ဈေးရောင်းပြီး အတန်အသင့် ချောင်လည်တဲ့ မိသားစုပါ ။
ဖိုးတုတ် မှာ ညီ ကိုဘသိန်း၊ ညီမ အရပ် ၅ ပေ ၈ လက်မ ၊ အသားညိုညို နှုတ်ခမ်းမွှေး ထားတတ်တဲ့ ဖိုးတုတ် ဟာ ဘဝကို အပူအပင် မရှိ ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ သူပါ..။ ဖိုးတုတ် ဟာ သူနေ တဲ့ လမ်းမတော် (၁၄)လမ်း မှာ အတန်းအစားပေါင်းစုံ နဲ့ အပေါင်းအသင်း ဆန့်သူတစ်ယောက်ဖြစ် ပြီး လူငယ် ပီပီ ဂျင်ဝိုင်း ၊ ကြက်ဝိုင်း တွေ မှာ လှည့်လည်ပျော်ပါး အချိန်ဖြုန်းရင်း တစ်ခါတစ်ရံ မိခင်ကို ကူညီဈေးရောင်း ရင်းနေ ခဲ့သူပါ ။
ဦးလေးတော် သူ ရဲ့ မြို့တွင်း ဆွဲ မော်တော်ကား မှာ စပါယ်ယာ လိုက်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် မဟုတ်မခံ စိတ်ကြောင့် ခဏခဏ ရိုက်မှုဖြစ် ပြီး အလုပ်ထွက်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုးတုတ်ရဲ့ လူမိုက် ဘဝက………..ဒီလိုစပါတယ်..။
ဖိုးတုတ် ကို လူမိုက် ဘဝရောက်အောင် စတင်ခဲ့တဲ့ သူကတော့ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ခေတ် မတိုင်ခင် လမ်းမတော် လူမိုက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့……….ပုဏားဘထွန်း ပါပဲ…။
အဲ့ဒီခေတ်က လမ်းမတော် မှာ ပုဏားဘထွန်း ၊ သိမ်ကြီးဈေး လှဖေ ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင် ကျောက်တံတား မတ်စတီးခန်း ၊ ကြည့်မြင်တိုင် ကြက်ကျား ၊ ဘားလမ်း ဟူစိန် ဆိုပြီး ရန်ကုန်မြို့ မှာ သူ့အပိုင်း နဲ့သူ အပိုင် စား လူမိုက် ကြီးတွေ ကြီးစိုးခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပုလိပ်အင်အားနဲ့လူဦးရေ မမျှတဲ့အတွက် ပုလိပ်တွေ ဟာ နယ်မြေတိုင်းက အပိုင်စား လူမိုက်တွေကို ခါးပိုက်ဆောင်ထဲ ထည့်ပြီး အုပ်ချုပ် ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ် ။နယ်မြေ အပိုင် လူမိုက်တွေ ဟာ ကိုယ်ပိုင် နက် နယ်မြေထဲက ဒုစရိုက်မှု က ရတဲ့ငွေကြေး ၊ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် စီးပွားရေး သမားတွေ ရဲ့ မိမိစီးပွားရေး မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးဖို့ ပေးတဲ့ လစဉ်ကြေးကို ခံစားလေ့ ရှိပါတယ်..။
ပုဏားဘထွန်းက ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအဖြစ် နာမည်ကြီး ပါ တယ်။ ပုဏား ဘထွန်း ရဲ့ နောက် မှာ ဗိုလ်တစ်ထောင် ကကုလား သူဌေးတစ်ဦးလည်းဖြစ် လူမိုက် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ မတ် စတီးခန်း ရှိပါ တယ်။ ပြီးတော့ ပုလိပ်မင်းကြီးနဲ့လည်း ပုဏားဘထွန်း ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ အင်မတန်ရင်းနှီးတယ် လို့ နာမည်ကြီး ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ဖိုးတုတ် ကလည်း လမ်းမတော် တဝိုက်မှာ နည်းနည်းလေးနာမည် ထွက်လာတဲ့ ဇ ရှိတဲ့ လူငယ်ခြေတက် ကလေးပေါ့..။
ဖိုးတုတ် က ဆင်းရဲသား မဟုတ် ၊ မိုက်ကြေးခွဲခံ ရတဲ့အထဲ မပါပေမယ့် လူမျိုးခြား လူမိုက်တွေ ရန်ကုန်မြို့ ထဲ စိုးမိုးခြယ်လှယ်နေတာ ကို လုံးဝ မကျေနပ် ၊ မြန်မာ လူမျိုးတွေ သတ္တိ နည်းလို့ လူမျိုးခြား လူမိုက်တွေ ဗိုလ်ကျခံနေရတာ ကို မနှစ်မြို့ ၊ ပြီးတော့ သိမ်ကြီးဈေး လှဖေ တို့လို မြန်မာ လူမိုက်တွေ ကလည်း ကိုယ့် အပိုင် နယ်လောက်မှာ သာ ကျယ်နိုင်ပြီး တစ်ခြားနယ်တွေမှာ ကုလား လူမိုက်တွေ မြန်မာ လူမျိုးတွေကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ ကိစ္စတွေကို လက်ရှောင်နေတတ် ကြတာ ဟာ ဒီကုလား လူမိုက်တွေကို မြန်မာ လူမိုက်တွေ က ကြောက်လို့ပဲလို့ ယူဆမိပြီး ခံပြင်းနေခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ လူမိုက်လောက ထဲ ဝင်ဖို့ ဖိုးတုတ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကို ပိုမို ခိုင်မာစေမဲ့… ကိစ္စတစ်ခု ပေါ်လာ ပါတော့ တယ် ။
ပြသနာက ဒါလ်ဟိုဇီလမ်း မှာအပိုင်စားပြီး ဈေးသည်တွေ ကို မိုက်ကြေးလိုက် ခွဲနေတဲ့ မတ်စတီးခန်း ရဲ့ တပည့် မာမွတ် နဲ့ဖိုးတုတ် တို့ စကားများရာ က ဖိုးတုတ် က မာမွတ်ကို မူလီခေါင်းတပ် တုတ် နဲ့ မသေ မရှင်ရိုက်လိုက်ရာ က စတာပါ..။
မာမွတ်ကို ရိုက်လိုက်တဲ့ ကိစ္စအတွက် လူမိုက်ကြောနောကြေနေ တဲ့ မတ်စတီးခန်း က သူ့တပည့်ကုလား လူမိုက်တွေ ကို ဖိုးတုတ်ကို ရန်သွား မရှာကြဖို့ ၊ ဖိုးတုတ် ဟာ မီးခဲ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုပြီး တားမြစ်ခဲ့ ပါသေးတယ်..။
ဒါပေမယ့် မာမွတ် ကိစ္စမကျေနပ် တဲ့ မတ်စတီးခန်း တပည့် နှစ်ယောက်က ဖိုးတုတ် ကို ပြသနာ ရှာကြရာ မှာ နှစ်ယောက်လုံး ဖိုးတုတ် က ဓါးမြောင် နဲ့ထိုးလွှတ်လိုက်ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် လည်း မတ်စတီးခန်းရော ၊ ပုဏားဘထွန်း ပါ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ ဖိုးတုတ် ကို ပြသနာ လာမရှာကြတာကိုက ဖိုးတုတ်အတွက် ဝိရောဓိဖြစ်စရာ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ် ..။
ပုဏားဘထွန်းက သူ့လူကို ထိရင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်တတ်သည် ဆိုတာ ရာဇဝင်တွေ ရှိတာကို ဖိုးတုတ်သိ သည်.. ဒီအတိုင်း ထိုင်နေပြီး သူလာမယ့် အချိန် စောင့်နေတာ ထက် ပုဏားကို သွားရှင်းမည်။ ပြီးတော့ နယ်မြေ အပိုင်လူမိုက်တွေ ကို တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ဆက်ရှင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့ တယ်………..။
၁၉၃၂ ခုနှစ် ၊ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော် (၁၁)လမ်း ၊လမ်းမတော် တစ်ရပ်ကွက်လုံး မှ ဆင်းရဲသား ၊ လူချမ်းသာ ၊ ဖိုးတုတ် ၏ မိဘများပါ မကျန် ဖိန့်ဖိန့် တုန်အောင် ကြောက်ရွံ့ရသော ၊ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ အခြားနယ်မြေ အပိုင်စား လူမိုက် အချင်းချင်းပင် ဆရာကြီး ဟု ရှေ့က တပ်ခေါ် ရလေသော ပုဏားဘထွန်း ၏ အိမ်ရှေ့သို့ မြနေအောင်သွေးထားသည့် ငှက်ကြီးတောင် ဓါးဖြင့် လူမိုက်ပေါက်စ တစ်ယောက်ရပ်နေသည်…။
ဖိုးတုတ်……ငှက်ကြီးတောင်ဓါး ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်ပြီး တစ်ယောက်ချင်း ဓါးချင်း ယှဉ်ခုတ်မည် အိမ်ပေါ်က ဆင်းခဲ့ ဖို့ စိန်ခေါ်ပါတယ် ။
တပည့်တပန်း အလွန်ပေါများပြီး လူမိုက် အချင်းချင်းပင် ကြောက်ရသော လူမိုက်ကြီး ပုဏားဘထွန်း အိမ်ပေါ်က လုံးဝ ဆင်းမလာ ။
တကယ်တော့ ပုဏားဘထွန်းနဲ့ ဖိုးတုတ် အသက်ချင်း အရွယ်ချင်း ကွာလွန်းနေပြီ ။ ဘယ်လောက်ပဲ မိုက်ခဲ့ မိုက်ခဲ့ နွားအို က ပေါင်ကျိုးနေပြီဖြစ်တဲ့ ပုဏား အနေဖြင့် ဖိုးတုတ် နှင့် တစ်ယောယ်ချင်း ယှဉ်လို့ မဖြစ် နိုင်တော့မှန်း သိသည်.. အိမ်ပေါ်က လုံးဝဆင်းမလာ ။
အကြိမ်ကြိမ် စိန်ခေါ်ပြီး ဖိုးတုတ်က စကားတစ်ခွန်းပြော သွားသည် ။
” ခင်ဗျားက လူမိုက် ပုဏား မဟုတ်တော့ဘူး.. ဆန်တောင်းတဲ့ ပုဏ္ဍားဖြစ်သွားပြီ……….
ဖိုးတုတ် က ဒီနေ့က စပြီး လမ်းမတော် လူမိုက်ဖြစ်သွားပြီ ”
တကယ့် ဝါရင့်လူမိုက်ကြီး ပုဏားဘထွန်း ကိုပင် အိမ်ရှေ့သွား စိန်ခေါ်သော ဖိုးတုတ် သတင်း က တစ်ခြား နယ်ပယ် ပိုင် လူမိုက်ကြီးတွေကြား ဂရက် ရိုက်သွားပါတော့တယ်…။
အဲ့ဒီလို နဲ့ ရန်ကုန် လူမိုက်လောက မှာ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် က အချိန်တို အတွင်း နေရာရခဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ဆိုတာ အပိုင်း(၂)
အဲ့ဒီခေတ်က ရန်ကုန်မြို့ ရပ်ကွက် အသီးသီးမှာ တစ်ဗိုလ် တစ်မင်း စိုးမိုး မင်းမူနေသည့် ရပ်ကွက် အပိုင် စား လူမိုက် များ သာ ကြီးစိုး ပါတယ်..။ လူမိုက် အချင်းချင်းနယ် မကျော်ကြပဲ နယ်ကျော် တဲ့ လူမိုက်တွေ အတွက်လည်း ဇာတ်သိမ်း မကောင်းခဲ့တာ ထုံးစံလိုဖြစ်နေ ခဲ့ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ကတော့ လမ်းမတော် တစ်ရပ်ကွက်ထဲ မှာ ထိုင်ပြီး မင်းမူနေရုံ နဲ့ ကျေနပ် နိုင်သူ မဟုတ်ပါဘူး..။ ဖိုးတုတ် ပထမဆုံး မျက်စောင်းထိုးတာ ကတော့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ပါ.. ။ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း မှာက ဗိုလ်တစ်ထောင် ၊ ကျောက်တံတား လူမိုက် မတ်စတီးခန်း ကြီးစိုးနေပါတယ် ။
မတ်စတီးခန်း က တော့ သူ့လက်ရုံး မာမွတ်ကိစ္စပြီး ကတည်းက ဖိုးတုတ်ကို ရှောင်ဖို့ သူ့တပည့်တွေကို မှာပါတယ်..
ဒါပေမယ့်…………ဖိုးတုတ် ပန်းဆိုးတန်း ကို ကိစ္စ တစ်ခုနဲ့သွားတဲ့ ည မှာ မတ်စတီးခန်း တပည့် တစ်ယောက် က နယ်ကျော်လာ တယ်ဆိုပြီး ဖိုးတုတ်ကို ရင့်ရင့် သီးသီးပြောခဲ့တဲ့ အတွက် အဲ့ဒီ လူမိုက် ဟာ ဖိုးတုတ် ဓါးချက်နဲ့ အူပွင့်တဲ့ အထိ အထိုးခံခဲ့ ရပါတော့တယ်..။
မတ်စတီးခန်း ဟာ ဖိုးတုတ် နဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့မယ် ထင်ခဲ့ပေမယ့်… သူ တကယ်ရင်ဆိုင် လိုက်ရတာက သူ့ဗိုလ်တစ်ထောင်နယ်ထဲ က လူမိုက်ပေါက်စလေး ငမိုး ပါပဲ..။ မတ်စတီးခန်း ရဲ့ တပည့်တွေ ကြီးစိုးနေ တဲ့ ဗိုလ်တစ်ထောင် ဘုရားပွဲတော် ညတစ်ည မှာ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ထဲက ပျံကျပေတေနေတဲ့ ဆိုးသွမ်း လူငယ်လေး တစ်ယောက်က မတ်စတီးခန်း တပည့် ကုလားလူမိုက် (၈)ယောက်ကို ဓါးနဲ့ ဝင် ပိုင်းပါတယ် ။
ကုလားလူမိုက် (၃)ယောက် သေလုမျောပါး ဒဏ်ရာရသွားကြပြီး ကျန်တဲ့ လူမိုက်တွေလည်းခွေးပြေး ဝက်ပြေး ပြေးခဲ့ ရပါတော့တယ်…. ဒီအချိန်က စလို့ မက်စတီးခန်း ဟာ ပန်းဆိုးတန်း ကို ဖိုးတုတ်လက် ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင် ကို ငမိုးလက် အပ်ပြီး လူမိုက်လောက ကနေ တစ်ဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ် သွားပါတော့ တယ်..။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် နဲ့ မရှေးမနှောင်း မှာပဲ ဓားရေးကြွယ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုး ရဲ့ နာမည် ဟာလည်း ရန်ကုန် လူမိုက်လောက မှာ တဖြည်းဖြည်းကြီးမား လာပါတော့တယ်..။
ငမိုး ပခုံးချင်းယှဉ်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် က သူ့ထုံးစံ အတိုင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတော့တယ်..။
ရန်ကုန်ရဲ့ ချမ်းစီးစီး ဒီဇင်ဘာ မနက်ခင်း တစ်ခုမှာ သက္ကလပ် အင်္ကျီအထူစားအောက်မှာ ဓားရှည် တစ်ချောင်း ကို လွယ်ပြီး ဘိုကလေးဈေး (ဘရုတ်ကင်းဈေး) လမ်းထဲ ကို ဝင်လာတဲ့ ဖိုးတုတ် ကို တွေ့ရပါတယ်..။
ဖိုးတုတ်က ဗိုလ်တစ်ထောင်ငမိုးအိမ်ရှေ့ရပ်လိုက်တယ်ဆိုလျှင်ပဲ…ငမိုးဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ပြူးပြူး ပြာပြာဖြစ် သွားပါတယ် …. ငမိုး ချက်ချင်း အိမ်ပေါ်ကပြေးဆင်းပြီး လာရင်း ကိစ္စကိုမေး ပါတော့တယ်.။
ဖိုးတုတ် က သက္ကလပ် အင်္ကျီ ကို ဆွဲချွတ်ပြီး ရင်ဘတ်ကိုကော့ပေးသည်.. အေး ငမိုး မင်းဓါးရေးထက် တယ်ဆိုလို့ ငါလာ အထိုးခံကြည့်တာ ဟု အော်ကြီး ဟစ်ကျယ်ပြောတော့သည် ။
ငမိုးကလည်း လူနပ်…။ ပုဏားလိုတော့ အရှက်ကွဲ မခံနိုင် ။ ဒီတော့ ဖိုးတုတ် ကို ပြုံးပြရင်း”ဟာ အကိုကြီး ကလည်း မဟုတ်တာ ဒီအကြောင်းတွေ မပြောပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဗမာညီအစ်ကို ချင်း ကြား မှာ ဒါမျိုးတွေရှိသေးလားဗျာ.. အကိုတွေ့ချင်ရင်ခေါ်ခိုင်း လိုက်ပေါ့..တကူးတက ကျွန်တော့်ဆီ လာနေရ တယ်လို့”
“အေး မင်းက ဗိုလ်တစ်ထောင် မှာ ဗိုလ်မထားဘူး ဆိုလို့.. ငါကလည်း ဗိုလ်လာ လုပ်တာလေကွာ”
“ဟာ အကိုကြီးရာ ကျွန်တော့် ကို မကြိုက်တာရှိရင် ဆုံးမလို့ရပါတယ်.. နာခံပါ့မယ်..ကျွန်တော် အကိုကြီး ကို ဧည့်ဝတ်ပြုပါရစေ ”
ဖိုးတုတ် ဘာမှ မပြောတော့ပါ… ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုး … နယ်မြေ ချင်း စည်းမကျော် ဖို့သာပြော ခဲ့ပြီး ..။
အပြန်တွင်တော့ အလာတုန်း ကလို မဟုတ်…………ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုးပိုင် ရထားလုံးနှင့် ဖိုးတုတ်ကို အိမ်အရောက် လိုက်ပြန်ပို့ပေးပါတော့တယ်………….။
အဲ့ဒီအချိန်က စပြီး ဗိုလ်တစ်ထောင် ငမိုး သေဒဏ် ကျသွားတဲ့ အချိန်အထိ ဖိုးတုတ်နဲ့ ငမိုးတို့ဟာ သံခင်း တမန်ခင်း ဆက်ဆံရေးနဲ့ ဘာပြသနာ မှ ထပ်မဖြစ်ကြတော့ပါဘူး..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ဟာ အရင် လူမိုက်တွေလို ကိုယ့်နယ်မြေ ကျဉ်းကျဉ်းလေး ထဲ မင်းမူနေတာ မဟုတ် တဲ့အတွက် ကြည်မြင်တိုင် ၊ ပုဇွန်တောင် ၊ လသာ ၊ ကမ်းနားလမ်း သိမ်ကြီးဈေး လူမိုက်တွေက အစ ဖိုးတုတ်ရဲ့ တပည့်အဖြစ် ဝင်ရောက်လာပြီး နယ်မြေဆိုင်ရာ ဆက်ကြေး တစ်ပုံကို လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ထံ သွင်းကြရပါတော့တယ် ..။
ရန်ကုန်မြို့ထဲ က ဘိန်းခန်းများ ၊ ဇိန်ခန်းများ ၊ ဟိုတယ်များ ၊ ပျော်ပွဲစား ရုံကြီးများ မှ အစ သိမ်ကြီးဈေး၊ သံဈေး ရှိ အရောင်းအဝယ် ဒိုင်ကြီးများ၊ လောင်းကစား ဝိုင်းများ အလယ် ၊ ကြည့်မြင့်တိုင် စက်ဆန်း ပြေး ဆွဲသော ဘတ်စ်ကားလိုင်းတွေ ၊ ဂိတ်ထိုးသည့် Taxi ကားများ အဆုံး လစဉ် ဆက်ကြေး များအား ဖိုးတုတ် ထံ ပေးသွင်းရတော့သည်..။
လမ်းမတော်ဖိုးတုတ် ဝင်ငွေက တစ်လလျှင် (၃၀၀၀)နီးပါး ရှိသည် ဟု ခန့်မှန်းကြ သလို ဖယ်မလီယာ ကား(၂)စီးနှင့် မော်တော် တစီးပိုင်သည် အထိ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ လာခဲ့တော့သည်..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်က ရာဇဝတ်မှုများ လိုက်ရာတွင် နာမည်ကြီးသော ရှေ့နေကြီး ပန်ကာအေးကို လို လူကို ပင် ဥပဒေ အကြံပေးအဖြစ် လစာပေး ငှားထားလိုက်သေးသည်..။
နာမည်ကြီးလာသည် နှင့်အမျှ အပေါင်းအသင်း များလာသည် ။ ဗိုလ်အောင်ဒင် ရုပ်ရှင်မင်းသား ခင်မောင်ရင် ၊ ဇာတ်မင်းသားရွှေကျီးညို တို့ ဖိုးတုတ်နှင့် တတွဲတွဲ ဖြစ်လာသည် ။ နိုင်ငံရေးလောက မှ အမတ် များနှင့် တစ်စားပွဲတည်း ထိုင်သောက်နိုင်သည် အထိ ဖိုးတုတ် ပါဝါက ကြီးမားခဲ့သည် ။
လူမိုက် ဆိုတာ ဂျိုနဲ့လား ဆိုသော ဆိုရိုးစကား ရှိပါတယ်… ဖိုးတုတ် က ဂျိုနဲ့ လူမိုက် မဟုတ်ပေမယ့် နှလုံးသား နဲ့ လူမိုက်ပါ……….။
ဖိုးတုတ် နှလုံးသား ကို ညှိငင် ဖမ်းစားထားတာ က လမ်းမတော် သူ တရုတ်ကပြား မသင်းမြ..။
မသင်းမြ က အဖေ မရှိတော့ အမေနဲ့အဒေါ်က လမ်းမေတော် (၂၄)လမ်း၊ ကွမ်းတန်းဈေး တွင် ဈေးရောင်း တဲ့ သူတွေ.. ဖိုးတုတ် အမေနဲ့ မသင်းမြ အမေက ဥပုသ်စောင့် ၊ ဘုရားသွား အတူတူ လူရင်းတွေ..။
ငွေရေးကြေးရေးတောင့်တင်းပြီး ဖိုးတုတ် အမေ ဒေါ်ချစ်ပု ငွေလို လျှင် မသင်းမြ တို့ မိဘတွေ က ထောက် ပံ့နေကြ။ မသင်းမြ ကို ဖိုးတုတ် ကြိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် ဖွင့်မပြောရဲ ခဲ့… မသင်းမြ ရှေ့ရောက် လျှင်ပင် လူမိုက်ကြီး က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စကားမပြောရဲရှာ ..။
ဒါပေမယ့် တပည့် အရင်းတွေ..အပေါင်းအသင်း အရင်းတွေ နဲ့ အတူတူသောက်ကြတဲ့ အရက်ဝိုင်း မှာတော့ ဖိုးတုတ်ကြီး ရဲ့ ရင်တွင်းဝေဒနာတွေ က အန်အန် ထွက်လာ တတ်လို့…. ဖိုးတုတ် ရင်တွင်းက အချစ် ဓာတ်တွေ ကို သူ့ညီ ဘသိန်းနဲ့ တပည့် ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ လသာ လူမိုက် စံဘသောင်းရီ (ခေါ်) ဂန္ဒမာ ဆောင်းရင် ၊ ကမ်းနားလမ်း အုန်းဖေ ၊ လွစ်စ်လမ်း ငညွန့် ၊ တာမွေအောင်ဘ ၊ လက်ကောက် ချန်ထွန်း တို့က အူမချေးခါး မကြားချင် မှ အဆုံး သိထားပြီးသား..။
မသင်းမြ က ဘာသာ တရားရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ ကြီးပြင်း လာခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး ပီပီ ဖိုးတုတ်လို နာမည် ကြီး လူမိုက် ကို ဝေးဝေးရှောင် ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မသင်းမြက ဖိုးတုတ်ညီ ကိုဘသိန်း နဲ့တော့ တော်တော် ရင်းနှီးပါတယ်တဲ့……။
ဈေးထဲမှာ မသင်းမြ ကလည်း မဟုတ်မခံ ဇတ်ဇတ်ကြဲ…ဆိုတော့ ဘသိန်း က သူ့အကိုနဲ့ စိတ်ချင်းတူ သဟဲ့ ဆိုပြီး မသင်းမြ ကို သူ့အကို ဖိုးတုတ်နဲ့ ကြိတ် သဘောတူနေပါတယ် ။
မသင်းမြ ဈေးရောင်း တဲ့နေရာကို ဘသိန်း ရောက်လာပြီး ကိုဖိုးတုတ် က မသင်းမြ ကို ချစ်ကြောင်း ကြိုက်ကြောင်း ကို အောင်သွယ်ပြောပါတော့တယ်.. အဲ့ဒီမှာ မသင်းမြက ဘသိန်းကို ခဲနဲ့ကောက်ထု လိုက်ပါလေရောလား…နဖူး အာလူးသီးကြီး ကို အုပ်ပြီး အောင်သွယ်တော် ဘသိန်းက စပ်ဖြဲဖြဲ နဲ့ နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်..။
အဲ့ဒီညက လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် နှင့် တွဲဖက် ရုပ်ရှင် မင်းသားခင်မောင်ရင် ၊ ဇာတ်မင်းသား ရွှေကျီးညို ၊ ရုပ်ရှင် မင်းသားကျော်စိုး တို့ နန်းသီတာ ဆိပ်ကမ်းက သင်္ဘော တစ်စီးပေါ်မှာ လေညှင်း ခံရင်း အရက်သောက်ခဲ့ရာ မှ အမူးလွန်သွားခဲ့ ပါတယ်..။
ခင်မောင်ရင် ကားနဲ့ ဖိုးတုတ် ကို အိမ်အထိ လိုက်ပို့ကြပြီး သူငယ်ချင်းတွေပြန်သွားကြတော့ ဖိုးတုတ် အိပ်ပျော်သွား ပါလေရောလား..။
မနက် မိုးလင်းတော့ အခန်း တံခါးခေါက်သံကြောင့် ဖိုးတုတ် တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့…သူ့ညီ ဘသိန်း နဲ့ တပည့်တွေက မိန်းမ တစ်ယောက်ကို အတင်းဆွဲခေါ်လာပြီး ဖိုးတုတ် အခန်းထဲ အတင်း တွန်းပို့တော့ ပါလေရော..။
“ဟေ့ ကောင်တွေ ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ”
“အကိုပဲ ညက မသင်းမြ ကို မရရင် သေတော့မယ်ဆို..အဲ့ဒါနဲ့ ကျုပ်တို့ စီမံလာပေးတာ” ဘသိန်း က ပြောပြော ဆိုဆိုနှင့် တံခါးကို ဆွဲပိတ် လိုက်ပြီး အပြင်က သော့ခတ် လိုက်ပါတော့တယ်..။
(အမှန်က မင်းသား ခင်မောင်ရင် စနက်ပါ.. ကိုဖိုးတုတ် ကိုလိုက်ပို့ရင်း ကနေ ဖိုးတုတ် ညီနဲ့တပည့် တွေကို မင်းတို့ အကိုတော့ မသင်းမြ ကို မရရင် နန်းသီတာ ဆိပ်က ခုန်ချမယ် လုပ်နေလို့ မူးအောင် တိုက်ပြီးပြန်ခေါ် လာတာ ဆိုပြီး သရုပ်ဆောင်ပြ သွားတာကို တပည့်တွေက အတည် ထင်ပြီး အခုလို လုပ်ပေး လိုက်ကြတာပါ..ပဲ)
ဖိုးတုတ် တပည့်တွေ ကို ဒေါသ ထွက်သလို..မသင်းမြ ကို အားနာနေသည် ။ မသင်းမြ က ငိုယိုနေတာမြင် ရတော့ သူ စိတ်မကောင်း.. ပြီးတော့ မသင်းမြ အမေတွေ က သူ့အမေ ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေ…. အခုတော့ ဘသိန်း နဲ့ တပည့်တွေကြောင့် အမေ မျက်နှာပျက် ရတော့မည်.. ဖိုးတုတ် ကို ဆဲသည် ။ ဖိုးတုတ်က ရှင်းပြသည် ။
တကယ်တော့ ဘသိန်း နှင့်တပည့်များ က မသင်းမြ အိမ်ကနေ ဈေးကို အထွက်မှာ ကားပေါ် တင်ဆွဲလာ ခဲ့ခြင်းတဲ့…..
ရန်ကုန် တစ်မြို့လုံး လွှမ်းမိုးနေသည့် ဖိုးတုတ် ၊ ဒုစရိုက် သမားတိုင်း ဦးညွှတ်ရသော ဖိုးတုတ် ၊ အသက် အရွယ် နှင့် ဥစ္စာပစ္စည်း ရှိသော သူဌေးလေး ဖိုးတုတ် ၊ သေရဲ ၊ သတ်ရဲ ၊ ရိုက်ရဲ လူမိုက်ကြီး ဖိုးတုတ် .. အခုတော့ မသင်းမြ ကို တောင်းပန်စကားတွေ တတွတ်တွတ် ဆိုနေရှာသည်။
မသင်းမြ ကလည်း လူမိုက်တွေ ပေါများ လှသည့် ရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေ မိန်းမသားတွေ ချည်း ဈေးရောင်း စားနေရ သည့် ဘဝက မလုံခြုံ.. ဖိုးတုတ်နှင့် ပတ်သက်မိလျှင် မိမိ မိဘအသိုင်းအဝိုင်း အားလုံးကို ဘယ်သူ မှ မတို့ရဲ မထိရဲသည့် လုံခြုံမှု ရလာနိုင်သည် ကိုတွေးမိသွားတယ် ထင်ပါရဲ့…။ အဲ့ဒီ အခန်းလေးထဲ မှာ ဖိုးတုတ် လူပျိုဘ၀ တစ်စခန်း သိမ်းသွားတော့သည်။
ဖိုးတုတ် အတု (သို့) လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်
မင်္ဂလာဆောင် ခါနီး ပျော်ရွှင်နေသော လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ဒေါသ ထွက်နေပါတယ်..။
သားလုပ် သမျှ ချိုသည် ခါးသည် မပြောဖူးသော မိခင်ကြီး ဒေါ်ချစ်ပု က အခု နာနာကြည်းကြည်းနှင့် လာပြော သွားတဲ့ စကားက…..ဖိုးတုတ် ကို ယမ်းပုံ မီးကျစေပါတော့တယ်။
“ဖိုးတုတ် နင် လူမိုက် ရုံတင် မကတော့ဘူး လူလိမ် လူယုတ်မာဖြစ်နေပြီ…. ငါတို့ ဈေးရောင်းစား လာ တာ တစ်သက်လုံး သူတစ်ပါး ပစ္စည်းကိုမလိမ်မညာ ခဲ့ဘူး..နင့် ကျမှ တစ်ဈေး လုံး ဟိုးဟိုးကျော် ကလိမ် ဖိုးတုတ်ဖြစ်နေပါလားဟဲ့” တဲ့ ။
တပည့်တွေ ကို စုံစမ်းခိုင်းကြည့်တော့ ဟုတ်သည် ။
သိမ်ကြီးဈေး နဲ့ လသာ တစ်ဝိုက်မှာ ဖိုးတုတ် ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကုန်တွေ မှာပြီးနယ်ပို့ သတဲ့.. ပြီးတော့ ကုန်သည်တွေ ကို ပိုက်ဆံ မရှင်းပဲ ဗြောင်လိမ်သည် ။ ကုန်သည်တွေ ခမျာ လည်း ဖိုးတုတ် ဆိုသည့် နာမည်ကြား သည်နှင့်ပင် သွား မတောင်းရဲတော့ချေ..။
ဖိုးတုတ် ဓါးဆွဲပြီး ဆင်းလာခဲ့သည်……………….။ ………..အဲ့ဒီ ဖိုးတုတ် က ဘယ်သူလဲ ။ ကြာကြာ မစုံစမ်းရ..လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်တော့ မဟုတ် လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ် တဲ့ ပွဲစား ဖိုးတုတ်လို့လဲ ခေါ်သတဲ့..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်…..လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်ကြောင့် ဒေါသထွက်ရပြီ..။
မကြာမီ……..ဖိုးတုတ် တပည့်တွေ လက်ထဲမှာ ယက်ကန်ယက်ကန် နဲ့ မူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် ပါလာ ပါတော့တယ်..။
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ကို အထင်သေး သည့် အမူအယာဖြင့် လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်က ကြည့်လိုက်သည်။
“ခင်ဗျား..ဘယ်သူလဲ..ကျုပ်ကို ဘယ်သူမှတ် လို့ ဒီလိုခေါ်လာတာလဲ ..သေချင်လို့လား”
လမ်း(၃၀) က ဟောက်သည်..လမ်းမတော် က ရယ်သည်.။
“ကျုပ်နာမည် ဖိုးတုတ်ဗျ..ဖိုးတုတ်..ခင်ဗျားကြားဖူးတယ် မှတ်လား” လမ်း(၃၀) က ထပ်ဟောက်သည်။
“အေး မင်းက ဖိုးတုတ် ဆို ရော့..”
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ်ကိုင်နေကျ မူလီခေါင်းတပ် ကြိမ်လုံးက လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ် မျက်နှာပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် ကျသွားသည် ။
“ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ..ကျုပ် အကြောင်း မသိသေးဘူး ထင်တယ်”
“အေး..မင်း ငါ့ကို သိက္ခာချ တယ်..လူလိမ်..ခွေး”
“ကျုပ် အလုပ်ကျုပ် လုပ်တာ ခင်ဗျားကို ဘာသိက္ခာ ချနေလို့လဲ”
လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်ကလည်း…….ပြန် ခံပက်သည် ။
“မအေ -ိုး………..ငါ လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် ကွ”
ဒီတော့မှ လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ် ခေါင်းနပန်းကြီး သွားပါတော့တယ်……သွားပြီ သူ့ဘဝ..။
“မင်းလိမ် ထားတာတွေ (၃)ရက် အတွင်း ပြန်ပေး..မပေးရင်………………”
လမ်းမတော် ဖိုးတုတ် စကားမဆုံးလိုက် သလို လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်လည်း စကားပြောခွင့် မရလိုက်ပါ.. မူလီခေါင်း တပ်ကြိမ်လုံးက လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ်ခေါင်းပေါ် အချက်ပေါင်းများစွာ ကျရောက်လာပါတော့ တယ်…………။
(၃)ရက်မြောက်နေ့ တွင် လမ်း(၃၀) ဖိုးတုတ် သည် သူ့အိမ် ကိုရောင်းချပြီး အကြွေးများ ချေသွားပါတော့ တယ်……….။
မူရင်းပိုင်ရှင်အား Crd ပေးပါတယ်
ကိုလိုနီခတျေ က ကုလားလူမိုကျတှနေဲ့ ပွိုငျပီး မိုကျခဲ့တဲ့ မွနျမာမြိုးခဈြလူမိုကျကွီး လမျးမတျော ဖိုးတုတျနှငျ့ သူ၏ ကိုယျရေး ရာဇဝငျ (ဖွဈရပျမှနျ) (စ/ဆုံး)
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျ မွနျမာ့ ရုပျရှငျလောက မှာ ထှကျပျေါ ခဲ့တဲ့ လူမိုကျ တဈရာ ဆိုတဲ့ ဇာတျကားကို လူကွိုကျ အတျောမြားခဲ့ ပါတယျ..။ ဒီဇာတျလမျးဟာ တဈခတျေတဈခါ က ရနျကုနျမွို့မှာ တကယျရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လူမိုကျကွီး လမျးမတျော ဦးဖိုးတုတျ ရဲ့ ဖွဈရပျမှနျ ဇာတျလမျး ကို ရိုကျကူး ထားတယျ လို့လညျး ပွောနေ ဆိုနတောတှေ ကွားခဲ့ဖူး ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော ဒီဇာတျလမျးခှေ ကို ကွညျ့ပွီးတဲ့ အခါမှာတော့ လမျးမတျော ဖိုးတေ ဇာတျလမျး ဟာ သမိုငျး အခကျြအလကျ အရ လမျးမတျောဖိုးတုတျ ဇာတျလမျးအစဈ အမှနျ လုံးဝ မဟုတျဘူး သိလိုကျ ရပါ တယျ..။အဲဒီ ဇာတျကားကွညျ့ပွီး တဲ့ လူတျောတျောမြားမြား ကတော့ ဒါဟာ လမျးမတျော ဖိုးတုတျ သမိုငျး အမှနျပဲ လို့ ထငျနကွေတဲ့ အတှကျ ကြှနျတျော ဒီသမိုငျးကွောငျး ကို ရေးသား ရခွငျးဖွဈပါတယျ
လူမိုကျ တဈယောကျရဲ့ သမိုငျးကွောငျး ကို မငျးက ဘာလို့ ဒီလောကျ ရှငျးခကျြတှေ ထုတျနတော လဲဆိုပွီး မေးလာ သူတှရှေိပါလိမျ့မယျ..။ ကြှနျတျောရှငျးပါ့မယျ။
ဦးဖိုးတုတျ ဟာ ကိုလိုနီခတျေ မှာ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ ပွိုငျဘကျ မရှိ နာမညျ အကြျောကွားဆုံး မွနျမာ လူမြိုး လူမိုကျ တဈဦးပါ။
ယို့ယှငျးနတေဲ့ ကိုလိုနီ အုပျခြုပျရေးစနဈ နဲ့အတူ လူမြိုးခွား လူမိုကျတှေ ကွီးစိုးနတေဲ့ ရနျကုနျမွို့ မှာ လူမြိုးခွား မိုကျတှကေို နှိပျကှပျ ခဲ့ပွီး မွနျမာတှေ ဘကျကရပျတညျပေး ခဲ့တဲ့ မွနျမာ လူမိုကျကွီး ပါ ။
မခံခငျြ စိတျကွောငျ့ အသကျငယျငယျ မှာ လူဆိုး လူမိုကျဖွဈခဲ့ ရပမေယျ့ ဦးဖိုး တုတျဟာ လူယုတျမာ တဈယောကျတော့ မဟုတျခဲ့ပါဘူး..။
ခတျေရဲ့ သားကောငျ အဖွဈ လူဆိုး လူမိုကျဖွဈခဲ့ တဲ့ လမျးမတျော ဦးဖိုးတုတျရဲ့ တဈခွား မကျြနှာတဈဖကျ မှာ ရှိနတေဲ့ မြိုးခဈြစိတျ၊ နိုငျငံခဈြစိတျ၊ လှတျလပျရေး ကိုမွတျနိုးစိတျ ဆိုတဲ့ ဇာတိမာနျလေး ကို တှွေ့ မငျစေ ခငျြလို့ ၊ ရုပျရှငျကွညျ့ပွီး သမိုငျးအခကျြအလကျ အမှားတှကေို အမှနျလို့ မထငျစခေငျြလို့ ဒီစာ ကို ရေးရခွငျးဖွဈပါတယျ ။
လမျးမတျော ဖိုးတုတျ ဆိုတဲ့ လူမိုကျကွီး ဟာ ဟိုငျနနျကြှနျး မှာ စဈပညာ သငျကွားဖို့ သှားခဲ့တဲ့ ရဲဘျောသုံးကြိပျ အတှကျ ငှကွေေး အမြားဆုံး လှူဒါနျးခဲ့တဲ့သူ တဈဦးဖွဈတယျ ဆိုတဲ့ သမိုငျးမှာ မထငျရှားခဲ့တဲ့ဖွဈရပျလေးတှကေို ပျေါလှငျစခေငျြ တဲ့ စတေနာလညျးဖွဈပါတယျ..။
လမျးမတျော ဖိုးတုတျ ဆိုတာ
ဦးကြျောဟိနျး ရိုကျခဲ့ တဲ့ လမျးမတျော ဖိုးတေ ရုပျရှငျ ထဲကလို ဖိုးတုတျ ဟာ ကုနျထမျး သမားတဈယောကျ မဟုတျ သလို ဖိုးတုတျရဲ့ လူမိုကျ ဘ၀ ဟာ အစပွုခဲ့တာလညျးမဟုတျပါဘူး ။
ဖိုးတုတျ ရဲ့ မိခငျ ကွီးဒျေါခဈြပု ဟာ ရနျကုနျမွို့ (၁၄)လမျးမှာ ဈေးရောငျးပွီး အတနျအသငျ့ ခြောငျလညျတဲ့ မိသားစုပါ ။
ဖိုးတုတျ မှာ ညီ ကိုဘသိနျး၊ ညီမ အရပျ ၅ ပေ ၈ လကျမ ၊ အသားညိုညို နှုတျခမျးမှေး ထားတတျတဲ့ ဖိုးတုတျ ဟာ ဘဝကို အပူအပငျ မရှိ ဖွတျသနျးနိုငျခဲ့ သူပါ..။ ဖိုးတုတျ ဟာ သူနေ တဲ့ လမျးမတျော (၁၄)လမျး မှာ အတနျးအစားပေါငျးစုံ နဲ့ အပေါငျးအသငျး ဆနျ့သူတဈယောကျဖွဈ ပွီး လူငယျ ပီပီ ဂငျြဝိုငျး ၊ ကွကျဝိုငျး တှေ မှာ လှညျ့လညျပြျောပါး အခြိနျဖွုနျးရငျး တဈခါတဈရံ မိခငျကို ကူညီဈေးရောငျး ရငျးနေ ခဲ့သူပါ ။
ဦးလေးတျော သူ ရဲ့ မွို့တှငျး ဆှဲ မျောတျောကား မှာ စပါယျယာ လိုကျလုပျခဲ့ပမေယျ့ မဟုတျမခံ စိတျကွောငျ့ ခဏခဏ ရိုကျမှုဖွဈ ပွီး အလုပျထှကျခဲ့သူ တဈဦးဖွဈပါတယျ။
ဖိုးတုတျရဲ့ လူမိုကျ ဘဝက………..ဒီလိုစပါတယျ..။
ဖိုးတုတျ ကို လူမိုကျ ဘဝရောကျအောငျ စတငျခဲ့တဲ့ သူကတော့ လမျးမတျော ဖိုးတုတျ ခတျေ မတိုငျခငျ လမျးမတျော လူမိုကျကွီးဖွဈခဲ့တဲ့……….ပုဏားဘထှနျး ပါပဲ…။
အဲ့ဒီခတျေက လမျးမတျော မှာ ပုဏားဘထှနျး ၊ သိမျကွီးဈေး လှဖေ ၊ ဗိုလျတဈထောငျ ကြောကျတံတား မတျစတီးခနျး ၊ ကွညျ့မွငျတိုငျ ကွကျကြား ၊ ဘားလမျး ဟူစိနျ ဆိုပွီး ရနျကုနျမွို့ မှာ သူ့အပိုငျး နဲ့သူ အပိုငျ စား လူမိုကျ ကွီးတှေ ကွီးစိုးခဲ့ပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့ အုပျခြုပျရေးမှာ ပုလိပျအငျအားနဲ့လူဦးရေ မမြှတဲ့အတှကျ ပုလိပျတှေ ဟာ နယျမွတေိုငျးက အပိုငျစား လူမိုကျတှကေို ခါးပိုကျဆောငျထဲ ထညျ့ပွီး အုပျခြုပျ ခိုငျးလေ့ရှိပါတယျ ။နယျမွေ အပိုငျ လူမိုကျတှေ ဟာ ကိုယျပိုငျ နကျ နယျမွထေဲက ဒုစရိုကျမှု က ရတဲ့ငှကွေေး ၊ ဈေးရောငျး ဈေးဝယျ စီးပှားရေး သမားတှေ ရဲ့ မိမိစီးပှားရေး မထိခိုကျအောငျ ကာကှယျပေးဖို့ ပေးတဲ့ လစဉျကွေးကို ခံစားလေ့ ရှိပါတယျ..။
ပုဏားဘထှနျးက ကွောကျစရာအကောငျးဆုံးအဖွဈ နာမညျကွီး ပါ တယျ။ ပုဏား ဘထှနျး ရဲ့ နောကျ မှာ ဗိုလျတဈထောငျ ကကုလား သူဌေးတဈဦးလညျးဖွဈ လူမိုကျ တဈဦးလညျး ဖွဈတဲ့ မတျ စတီးခနျး ရှိပါ တယျ။ ပွီးတော့ ပုလိပျမငျးကွီးနဲ့လညျး ပုဏားဘထှနျး ဟာ ပုဂ်ဂိုလျရေး အရ အငျမတနျရငျးနှီးတယျ လို့ နာမညျကွီး ပါတယျ ။
အဲ့ဒီ အခြိနျမှာ ဖိုးတုတျ ကလညျး လမျးမတျော တဝိုကျမှာ နညျးနညျးလေးနာမညျ ထှကျလာတဲ့ ဇ ရှိတဲ့ လူငယျခွတေကျ ကလေးပေါ့..။
ဖိုးတုတျ က ဆငျးရဲသား မဟုတျ ၊ မိုကျကွေးခှဲခံ ရတဲ့အထဲ မပါပမေယျ့ လူမြိုးခွား လူမိုကျတှေ ရနျကုနျမွို့ ထဲ စိုးမိုးခွယျလှယျနတော ကို လုံးဝ မကြနေပျ ၊ မွနျမာ လူမြိုးတှေ သတ်တိ နညျးလို့ လူမြိုးခွား လူမိုကျတှေ ဗိုလျကခြံနရေတာ ကို မနှဈမွို့ ၊ ပွီးတော့ သိမျကွီးဈေး လှဖေ တို့လို မွနျမာ လူမိုကျတှေ ကလညျး ကိုယျ့ အပိုငျ နယျလောကျမှာ သာ ကယျြနိုငျပွီး တဈခွားနယျတှမှော ကုလား လူမိုကျတှေ မွနျမာ လူမြိုးတှကေို အနိုငျကငျြ့တဲ့ ကိစ်စတှကေို လကျရှောငျနတေတျ ကွတာ ဟာ ဒီကုလား လူမိုကျတှကေို မွနျမာ လူမိုကျတှေ က ကွောကျလို့ပဲလို့ ယူဆမိပွီး ခံပွငျးနခေဲ့ပါတယျ။
ဒါနဲ့ပဲ လူမိုကျလောက ထဲ ဝငျဖို့ ဖိုးတုတျရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ ကို ပိုမို ခိုငျမာစမေဲ့… ကိစ်စတဈခု ပျေါလာ ပါတော့ တယျ ။
ပွသနာက ဒါလျဟိုဇီလမျး မှာအပိုငျစားပွီး ဈေးသညျတှေ ကို မိုကျကွေးလိုကျ ခှဲနတေဲ့ မတျစတီးခနျး ရဲ့ တပညျ့ မာမှတျ နဲ့ဖိုးတုတျ တို့ စကားမြားရာ က ဖိုးတုတျ က မာမှတျကို မူလီခေါငျးတပျ တုတျ နဲ့ မသေ မရှငျရိုကျလိုကျရာ က စတာပါ..။
မာမှတျကို ရိုကျလိုကျတဲ့ ကိစ်စအတှကျ လူမိုကျကွောနောကွနေေ တဲ့ မတျစတီးခနျး က သူ့တပညျ့ကုလား လူမိုကျတှေ ကို ဖိုးတုတျကို ရနျသှား မရှာကွဖို့ ၊ ဖိုးတုတျ ဟာ မီးခဲ ဖွဈလာနိုငျတယျ ဆိုပွီး တားမွဈခဲ့ ပါသေးတယျ..။
ဒါပမေယျ့ မာမှတျ ကိစ်စမကြနေပျ တဲ့ မတျစတီးခနျး တပညျ့ နှဈယောကျက ဖိုးတုတျ ကို ပွသနာ ရှာကွရာ မှာ နှဈယောကျလုံး ဖိုးတုတျ က ဓါးမွောငျ နဲ့ထိုးလှတျလိုကျပါတယျ..။
ဒါပမေယျ့ လညျး မတျစတီးခနျးရော ၊ ပုဏားဘထှနျး ပါ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ဘာမှ ဖိုးတုတျ ကို ပွသနာ လာမရှာကွတာကိုက ဖိုးတုတျအတှကျ ဝိရောဓိဖွဈစရာ ကိစ်စတဈခုဖွဈနပေါတယျ ..။
ပုဏားဘထှနျးက သူ့လူကို ထိရငျ ဘယျလိုပွနျလုပျတတျသညျ ဆိုတာ ရာဇဝငျတှေ ရှိတာကို ဖိုးတုတျသိ သညျ.. ဒီအတိုငျး ထိုငျနပွေီး သူလာမယျ့ အခြိနျ စောငျ့နတော ထကျ ပုဏားကို သှားရှငျးမညျ။ ပွီးတော့ နယျမွေ အပိုငျလူမိုကျတှေ ကို တဈယောကျပွီး တဈယောကျ ဆကျရှငျးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတော့ တယျ………..။
၁၉၃၂ ခုနှဈ ၊ရနျကုနျမွို့၊ လမျးမတျော (၁၁)လမျး ၊လမျးမတျော တဈရပျကှကျလုံး မှ ဆငျးရဲသား ၊ လူခမျြးသာ ၊ ဖိုးတုတျ ၏ မိဘမြားပါ မကနျြ ဖိနျ့ဖိနျ့ တုနျအောငျ ကွောကျရှံ့ရသော ၊ ရနျကုနျမွို့အတှငျးရှိ အခွားနယျမွေ အပိုငျစား လူမိုကျ အခငျြးခငျြးပငျ ဆရာကွီး ဟု ရှေ့က တပျချေါ ရလသေော ပုဏားဘထှနျး ၏ အိမျရှေ့သို့ မွနအေောငျသှေးထားသညျ့ ငှကျကွီးတောငျ ဓါးဖွငျ့ လူမိုကျပေါကျစ တဈယောကျရပျနသေညျ…။
ဖိုးတုတျ……ငှကျကွီးတောငျဓါး ကို ကဈြကဈြပါအောငျ ဆုတျပွီး တဈယောကျခငျြး ဓါးခငျြး ယှဉျခုတျမညျ အိမျပျေါက ဆငျးခဲ့ ဖို့ စိနျချေါပါတယျ ။
တပညျ့တပနျး အလှနျပေါမြားပွီး လူမိုကျ အခငျြးခငျြးပငျ ကွောကျရသော လူမိုကျကွီး ပုဏားဘထှနျး အိမျပျေါက လုံးဝ ဆငျးမလာ ။
တကယျတော့ ပုဏားဘထှနျးနဲ့ ဖိုးတုတျ အသကျခငျြး အရှယျခငျြး ကှာလှနျးနပွေီ ။ ဘယျလောကျပဲ မိုကျခဲ့ မိုကျခဲ့ နှားအို က ပေါငျကြိုးနပွေီဖွဈတဲ့ ပုဏား အနဖွေငျ့ ဖိုးတုတျ နှငျ့ တဈယောယျခငျြး ယှဉျလို့ မဖွဈ နိုငျတော့မှနျး သိသညျ.. အိမျပျေါက လုံးဝဆငျးမလာ ။
အကွိမျကွိမျ စိနျချေါပွီး ဖိုးတုတျက စကားတဈခှနျးပွော သှားသညျ ။
” ခငျဗြားက လူမိုကျ ပုဏား မဟုတျတော့ဘူး.. ဆနျတောငျးတဲ့ ပုဏ်ဍားဖွဈသှားပွီ……….
ဖိုးတုတျ က ဒီနေ့က စပွီး လမျးမတျော လူမိုကျဖွဈသှားပွီ ”
တကယျ့ ဝါရငျ့လူမိုကျကွီး ပုဏားဘထှနျး ကိုပငျ အိမျရှေ့သှား စိနျချေါသော ဖိုးတုတျ သတငျး က တဈခွား နယျပယျ ပိုငျ လူမိုကျကွီးတှကွေား ဂရကျ ရိုကျသှားပါတော့တယျ…။
အဲ့ဒီလို နဲ့ ရနျကုနျ လူမိုကျလောက မှာ လမျးမတျော ဖိုးတုတျ က အခြိနျတို အတှငျး နရောရခဲ့သူ တဈယောကျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ..။
လမျးမတျောဖိုးတုတျ ဆိုတာ အပိုငျး(၂)
အဲ့ဒီခတျေက ရနျကုနျမွို့ ရပျကှကျ အသီးသီးမှာ တဈဗိုလျ တဈမငျး စိုးမိုး မငျးမူနသေညျ့ ရပျကှကျ အပိုငျ စား လူမိုကျ မြား သာ ကွီးစိုး ပါတယျ..။ လူမိုကျ အခငျြးခငျြးနယျ မကြျောကွပဲ နယျကြျော တဲ့ လူမိုကျတှေ အတှကျလညျး ဇာတျသိမျး မကောငျးခဲ့တာ ထုံးစံလိုဖွဈနေ ခဲ့ပါတယျ..။
ဒါပမေယျ့ လမျးမတျောဖိုးတုတျ ကတော့ လမျးမတျော တဈရပျကှကျထဲ မှာ ထိုငျပွီး မငျးမူနရေုံ နဲ့ ကြနေပျ နိုငျသူ မဟုတျပါဘူး..။ ဖိုးတုတျ ပထမဆုံး မကျြစောငျးထိုးတာ ကတော့ ပနျးဆိုးတနျးလမျး ပါ.. ။ ပနျးဆိုးတနျးလမျး မှာက ဗိုလျတဈထောငျ ၊ ကြောကျတံတား လူမိုကျ မတျစတီးခနျး ကွီးစိုးနပေါတယျ ။
မတျစတီးခနျး က တော့ သူ့လကျရုံး မာမှတျကိစ်စပွီး ကတညျးက ဖိုးတုတျကို ရှောငျဖို့ သူ့တပညျ့တှကေို မှာပါတယျ..
ဒါပမေယျ့…………ဖိုးတုတျ ပနျးဆိုးတနျး ကို ကိစ်စ တဈခုနဲ့သှားတဲ့ ည မှာ မတျစတီးခနျး တပညျ့ တဈယောကျ က နယျကြျောလာ တယျဆိုပွီး ဖိုးတုတျကို ရငျ့ရငျ့ သီးသီးပွောခဲ့တဲ့ အတှကျ အဲ့ဒီ လူမိုကျ ဟာ ဖိုးတုတျ ဓါးခကျြနဲ့ အူပှငျ့တဲ့ အထိ အထိုးခံခဲ့ ရပါတော့တယျ..။
မတျစတီးခနျး ဟာ ဖိုးတုတျ နဲ့တိုကျရိုကျတှေ့မယျ ထငျခဲ့ပမေယျ့… သူ တကယျရငျဆိုငျ လိုကျရတာက သူ့ဗိုလျတဈထောငျနယျထဲ က လူမိုကျပေါကျစလေး ငမိုး ပါပဲ..။ မတျစတီးခနျး ရဲ့ တပညျ့တှေ ကွီးစိုးနေ တဲ့ ဗိုလျတဈထောငျ ဘုရားပှဲတျော ညတဈည မှာ ဗိုလျတဈထောငျမွို့နယျ ထဲက ပြံကပြတေနေတေဲ့ ဆိုးသှမျး လူငယျလေး တဈယောကျက မတျစတီးခနျး တပညျ့ ကုလားလူမိုကျ (၈)ယောကျကို ဓါးနဲ့ ဝငျ ပိုငျးပါတယျ ။
ကုလားလူမိုကျ (၃)ယောကျ သလေုမြောပါး ဒဏျရာရသှားကွပွီး ကနျြတဲ့ လူမိုကျတှလေညျးခှေးပွေး ဝကျပွေး ပွေးခဲ့ ရပါတော့တယျ…. ဒီအခြိနျက စလို့ မကျစတီးခနျး ဟာ ပနျးဆိုးတနျး ကို ဖိုးတုတျလကျ ၊ ဗိုလျတဈထောငျ ကို ငမိုးလကျ အပျပွီး လူမိုကျလောက ကနေ တဈဖွညျးဖွညျးနောကျဆုတျ သှားပါတော့ တယျ..။
လမျးမတျောဖိုးတုတျ နဲ့ မရှေးမနှောငျး မှာပဲ ဓားရေးကွှယျပါတယျ ဆိုတဲ့ ဗိုလျတဈထောငျ ငမိုး ရဲ့ နာမညျ ဟာလညျး ရနျကုနျ လူမိုကျလောက မှာ တဖွညျးဖွညျးကွီးမား လာပါတော့တယျ..။
ငမိုး ပခုံးခငျြးယှဉျလာပွီ ဆိုတာနဲ့ လမျးမတျောဖိုးတုတျ က သူ့ထုံးစံ အတိုငျး ထိပျတိုကျတှေ့ဖို့ ဆုံးဖွတျ လိုကျပါတော့တယျ..။
ရနျကုနျရဲ့ ခမျြးစီးစီး ဒီဇငျဘာ မနကျခငျး တဈခုမှာ သက်ကလပျ အင်ျကြီအထူစားအောကျမှာ ဓားရှညျ တဈခြောငျး ကို လှယျပွီး ဘိုကလေးဈေး (ဘရုတျကငျးဈေး) လမျးထဲ ကို ဝငျလာတဲ့ ဖိုးတုတျ ကို တှေ့ရပါတယျ..။
ဖိုးတုတျက ဗိုလျတဈထောငျငမိုးအိမျရှေ့ရပျလိုကျတယျဆိုလြှငျပဲ…ငမိုးဘာလုပျရမှနျးမသိ ပွူးပွူး ပွာပွာဖွဈ သှားပါတယျ …. ငမိုး ခကျြခငျြး အိမျပျေါကပွေးဆငျးပွီး လာရငျး ကိစ်စကိုမေး ပါတော့တယျ.။
ဖိုးတုတျ က သက်ကလပျ အင်ျကြီ ကို ဆှဲခြှတျပွီး ရငျဘတျကိုကော့ပေးသညျ.. အေး ငမိုး မငျးဓါးရေးထကျ တယျဆိုလို့ ငါလာ အထိုးခံကွညျ့တာ ဟု အျောကွီး ဟဈကယျြပွောတော့သညျ ။
ငမိုးကလညျး လူနပျ…။ ပုဏားလိုတော့ အရှကျကှဲ မခံနိုငျ ။ ဒီတော့ ဖိုးတုတျ ကို ပွုံးပွရငျး”ဟာ အကိုကွီး ကလညျး မဟုတျတာ ဒီအကွောငျးတှေ မပွောပါနဲ့ ကြှနျတျောတို့ဗမာညီအဈကို ခငျြး ကွား မှာ ဒါမြိုးတှရှေိသေးလားဗြာ.. အကိုတှေ့ခငျြရငျချေါခိုငျး လိုကျပေါ့..တကူးတက ကြှနျတေျာ့ဆီ လာနရေ တယျလို့”
“အေး မငျးက ဗိုလျတဈထောငျ မှာ ဗိုလျမထားဘူး ဆိုလို့.. ငါကလညျး ဗိုလျလာ လုပျတာလကှော”
“ဟာ အကိုကွီးရာ ကြှနျတေျာ့ ကို မကွိုကျတာရှိရငျ ဆုံးမလို့ရပါတယျ.. နာခံပါ့မယျ..ကြှနျတျော အကိုကွီး ကို ဧညျ့ဝတျပွုပါရစေ ”
ဖိုးတုတျ ဘာမှ မပွောတော့ပါ… ဗိုလျတဈထောငျ ငမိုး … နယျမွေ ခငျြး စညျးမကြျော ဖို့သာပွော ခဲ့ပွီး ..။
အပွနျတှငျတော့ အလာတုနျး ကလို မဟုတျ…………ဗိုလျတဈထောငျ ငမိုးပိုငျ ရထားလုံးနှငျ့ ဖိုးတုတျကို အိမျအရောကျ လိုကျပွနျပို့ပေးပါတော့တယျ………….။
အဲ့ဒီအခြိနျက စပွီး ဗိုလျတဈထောငျ ငမိုး သဒေဏျ ကသြှားတဲ့ အခြိနျအထိ ဖိုးတုတျနဲ့ ငမိုးတို့ဟာ သံခငျး တမနျခငျး ဆကျဆံရေးနဲ့ ဘာပွသနာ မှ ထပျမဖွဈကွတော့ပါဘူး..။
လမျးမတျော ဖိုးတုတျ ဟာ အရငျ လူမိုကျတှလေို ကိုယျ့နယျမွေ ကဉျြးကဉျြးလေး ထဲ မငျးမူနတော မဟုတျ တဲ့အတှကျ ကွညျမွငျတိုငျ ၊ ပုဇှနျတောငျ ၊ လသာ ၊ ကမျးနားလမျး သိမျကွီးဈေး လူမိုကျတှကေ အစ ဖိုးတုတျရဲ့ တပညျ့အဖွဈ ဝငျရောကျလာပွီး နယျမွဆေိုငျရာ ဆကျကွေး တဈပုံကို လမျးမတျော ဖိုးတုတျထံ သှငျးကွရပါတော့တယျ ..။
ရနျကုနျမွို့ထဲ က ဘိနျးခနျးမြား ၊ ဇိနျခနျးမြား ၊ ဟိုတယျမြား ၊ ပြျောပှဲစား ရုံကွီးမြား မှ အစ သိမျကွီးဈေး၊ သံဈေး ရှိ အရောငျးအဝယျ ဒိုငျကွီးမြား၊ လောငျးကစား ဝိုငျးမြား အလယျ ၊ ကွညျ့မွငျ့တိုငျ စကျဆနျး ပွေး ဆှဲသော ဘတျဈကားလိုငျးတှေ ၊ ဂိတျထိုးသညျ့ Taxi ကားမြား အဆုံး လစဉျ ဆကျကွေး မြားအား ဖိုးတုတျ ထံ ပေးသှငျးရတော့သညျ..။
လမျးမတျောဖိုးတုတျ ဝငျငှကေ တဈလလြှငျ (၃၀၀၀)နီးပါး ရှိသညျ ဟု ခနျ့မှနျးကွ သလို ဖယျမလီယာ ကား(၂)စီးနှငျ့ မျောတျော တစီးပိုငျသညျ အထိ ကွှယျဝ ခမျြးသာ လာခဲ့တော့သညျ..။
လမျးမတျော ဖိုးတုတျက ရာဇဝတျမှုမြား လိုကျရာတှငျ နာမညျကွီးသော ရှေ့နကွေီး ပနျကာအေးကို လို လူကို ပငျ ဥပဒေ အကွံပေးအဖွဈ လစာပေး ငှားထားလိုကျသေးသညျ..။
နာမညျကွီးလာသညျ နှငျ့အမြှ အပေါငျးအသငျး မြားလာသညျ ။ ဗိုလျအောငျဒငျ ရုပျရှငျမငျးသား ခငျမောငျရငျ ၊ ဇာတျမငျးသားရှကြေီးညို တို့ ဖိုးတုတျနှငျ့ တတှဲတှဲ ဖွဈလာသညျ ။ နိုငျငံရေးလောက မှ အမတျ မြားနှငျ့ တဈစားပှဲတညျး ထိုငျသောကျနိုငျသညျ အထိ ဖိုးတုတျ ပါဝါက ကွီးမားခဲ့သညျ ။
လူမိုကျ ဆိုတာ ဂြိုနဲ့လား ဆိုသော ဆိုရိုးစကား ရှိပါတယျ… ဖိုးတုတျ က ဂြိုနဲ့ လူမိုကျ မဟုတျပမေယျ့ နှလုံးသား နဲ့ လူမိုကျပါ……….။
ဖိုးတုတျ နှလုံးသား ကို ညှိငငျ ဖမျးစားထားတာ က လမျးမတျော သူ တရုတျကပွား မသငျးမွ..။
မသငျးမွ က အဖေ မရှိတော့ အမနေဲ့အဒျေါက လမျးမတေျော (၂၄)လမျး၊ ကှမျးတနျးဈေး တှငျ ဈေးရောငျး တဲ့ သူတှေ.. ဖိုးတုတျ အမနေဲ့ မသငျးမွ အမကေ ဥပုသျစောငျ့ ၊ ဘုရားသှား အတူတူ လူရငျးတှေ..။
ငှရေေးကွေးရေးတောငျ့တငျးပွီး ဖိုးတုတျ အမေ ဒျေါခဈြပု ငှလေို လြှငျ မသငျးမွ တို့ မိဘတှေ က ထောကျ ပံ့နကွေ။ မသငျးမွ ကို ဖိုးတုတျ ကွိုကျတယျ.. ဒါပမေယျ့ ဖှငျ့မပွောရဲ ခဲ့… မသငျးမွ ရှေ့ရောကျ လြှငျပငျ လူမိုကျကွီး က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စကားမပွောရဲရှာ ..။
ဒါပမေယျ့ တပညျ့ အရငျးတှေ..အပေါငျးအသငျး အရငျးတှေ နဲ့ အတူတူသောကျကွတဲ့ အရကျဝိုငျး မှာတော့ ဖိုးတုတျကွီး ရဲ့ ရငျတှငျးဝဒေနာတှေ က အနျအနျ ထှကျလာ တတျလို့…. ဖိုးတုတျ ရငျတှငျးက အခဈြ ဓာတျတှေ ကို သူ့ညီ ဘသိနျးနဲ့ တပညျ့ ရငျးတှဖွေဈတဲ့ လသာ လူမိုကျ စံဘသောငျးရီ (ချေါ) ဂန်ဒမာ ဆောငျးရငျ ၊ ကမျးနားလမျး အုနျးဖေ ၊ လှဈဈလမျး ငညှနျ့ ၊ တာမှအေောငျဘ ၊ လကျကောကျ ခနျြထှနျး တို့က အူမခြေးခါး မကွားခငျြ မှ အဆုံး သိထားပွီးသား..။
မသငျးမွ က ဘာသာ တရားရဲ့ အရိပျအောကျမှာ ကွီးပွငျး လာခဲ့တဲ့ မိနျးကလေး ပီပီ ဖိုးတုတျလို နာမညျ ကွီး လူမိုကျ ကို ဝေးဝေးရှောငျ ပါတယျ.. ဒါပမေယျ့ မသငျးမွက ဖိုးတုတျညီ ကိုဘသိနျး နဲ့တော့ တျောတျော ရငျးနှီးပါတယျတဲ့……။
ဈေးထဲမှာ မသငျးမွ ကလညျး မဟုတျမခံ ဇတျဇတျကွဲ…ဆိုတော့ ဘသိနျး က သူ့အကိုနဲ့ စိတျခငျြးတူ သဟဲ့ ဆိုပွီး မသငျးမွ ကို သူ့အကို ဖိုးတုတျနဲ့ ကွိတျ သဘောတူနပေါတယျ ။
မသငျးမွ ဈေးရောငျး တဲ့နရောကို ဘသိနျး ရောကျလာပွီး ကိုဖိုးတုတျ က မသငျးမွ ကို ခဈြကွောငျး ကွိုကျကွောငျး ကို အောငျသှယျပွောပါတော့တယျ.. အဲ့ဒီမှာ မသငျးမွက ဘသိနျးကို ခဲနဲ့ကောကျထု လိုကျပါလရေောလား…နဖူး အာလူးသီးကွီး ကို အုပျပွီး အောငျသှယျတျော ဘသိနျးက စပျဖွဲဖွဲ နဲ့ နောကျကွောငျးပွနျ လှညျ့ပွေးလာခဲ့ပါတယျ..။
အဲ့ဒီညက လမျးမတျော ဖိုးတုတျ နှငျ့ တှဲဖကျ ရုပျရှငျ မငျးသားခငျမောငျရငျ ၊ ဇာတျမငျးသား ရှကြေီးညို ၊ ရုပျရှငျ မငျးသားကြျောစိုး တို့ နနျးသီတာ ဆိပျကမျးက သင်ျဘော တဈစီးပျေါမှာ လညှေငျး ခံရငျး အရကျသောကျခဲ့ရာ မှ အမူးလှနျသှားခဲ့ ပါတယျ..။
ခငျမောငျရငျ ကားနဲ့ ဖိုးတုတျ ကို အိမျအထိ လိုကျပို့ကွပွီး သူငယျခငျြးတှပွေနျသှားကွတော့ ဖိုးတုတျ အိပျပြျောသှား ပါလရေောလား..။
မနကျ မိုးလငျးတော့ အခနျး တံခါးခေါကျသံကွောငျ့ ဖိုးတုတျ တံခါးကို ဆှဲဖှငျ့လိုကျတော့…သူ့ညီ ဘသိနျး နဲ့ တပညျ့တှကေ မိနျးမ တဈယောကျကို အတငျးဆှဲချေါလာပွီး ဖိုးတုတျ အခနျးထဲ အတငျး တှနျးပို့တော့ ပါလရေော..။
“ဟေ့ ကောငျတှေ ဒါ ဘာလုပျတာလဲ”
“အကိုပဲ ညက မသငျးမွ ကို မရရငျ သတေော့မယျဆို..အဲ့ဒါနဲ့ ကြုပျတို့ စီမံလာပေးတာ” ဘသိနျး က ပွောပွော ဆိုဆိုနှငျ့ တံခါးကို ဆှဲပိတျ လိုကျပွီး အပွငျက သော့ခတျ လိုကျပါတော့တယျ..။
(အမှနျက မငျးသား ခငျမောငျရငျ စနကျပါ.. ကိုဖိုးတုတျ ကိုလိုကျပို့ရငျး ကနေ ဖိုးတုတျ ညီနဲ့တပညျ့ တှကေို မငျးတို့ အကိုတော့ မသငျးမွ ကို မရရငျ နနျးသီတာ ဆိပျက ခုနျခမြယျ လုပျနလေို့ မူးအောငျ တိုကျပွီးပွနျချေါ လာတာ ဆိုပွီး သရုပျဆောငျပွ သှားတာကို တပညျ့တှကေ အတညျ ထငျပွီး အခုလို လုပျပေး လိုကျကွတာပါ..ပဲ)
ဖိုးတုတျ တပညျ့တှေ ကို ဒေါသ ထှကျသလို..မသငျးမွ ကို အားနာနသေညျ ။ မသငျးမွ က ငိုယိုနတောမွငျ ရတော့ သူ စိတျမကောငျး.. ပွီးတော့ မသငျးမွ အမတှေေ က သူ့အမေ ရဲ့ ကြေးဇူးရှငျတှေ…. အခုတော့ ဘသိနျး နဲ့ တပညျ့တှကွေောငျ့ အမေ မကျြနှာပကျြ ရတော့မညျ.. ဖိုးတုတျ ကို ဆဲသညျ ။ ဖိုးတုတျက ရှငျးပွသညျ ။
တကယျတော့ ဘသိနျး နှငျ့တပညျ့မြား က မသငျးမွ အိမျကနေ ဈေးကို အထှကျမှာ ကားပျေါ တငျဆှဲလာ ခဲ့ခွငျးတဲ့…..
ရနျကုနျ တဈမွို့လုံး လှမျးမိုးနသေညျ့ ဖိုးတုတျ ၊ ဒုစရိုကျ သမားတိုငျး ဦးညှတျရသော ဖိုးတုတျ ၊ အသကျ အရှယျ နှငျ့ ဥစ်စာပစ်စညျး ရှိသော သူဌေးလေး ဖိုးတုတျ ၊ သရေဲ ၊ သတျရဲ ၊ ရိုကျရဲ လူမိုကျကွီး ဖိုးတုတျ .. အခုတော့ မသငျးမွ ကို တောငျးပနျစကားတှေ တတှတျတှတျ ဆိုနရှောသညျ။
မသငျးမွ ကလညျး လူမိုကျတှေ ပေါမြား လှသညျ့ ရနျကုနျမွို့ကွီးတှေ မိနျးမသားတှေ ခညျြး ဈေးရောငျး စားနရေ သညျ့ ဘဝက မလုံခွုံ.. ဖိုးတုတျနှငျ့ ပတျသကျမိလြှငျ မိမိ မိဘအသိုငျးအဝိုငျး အားလုံးကို ဘယျသူ မှ မတို့ရဲ မထိရဲသညျ့ လုံခွုံမှု ရလာနိုငျသညျ ကိုတှေးမိသှားတယျ ထငျပါရဲ့…။ အဲ့ဒီ အခနျးလေးထဲ မှာ ဖိုးတုတျ လူပြိုဘ၀ တဈစခနျး သိမျးသှားတော့သညျ။
ဖိုးတုတျ အတု (သို့) လမျး(၃၀) ဖိုးတုတျ
မင်ျဂလာဆောငျ ခါနီး ပြျောရှငျနသေော လမျးမတျော ဖိုးတုတျ ဒေါသ ထှကျနပေါတယျ..။
သားလုပျ သမြှ ခြိုသညျ ခါးသညျ မပွောဖူးသော မိခငျကွီး ဒျေါခဈြပု က အခု နာနာကွညျးကွညျးနှငျ့ လာပွော သှားတဲ့ စကားက…..ဖိုးတုတျ ကို ယမျးပုံ မီးကစြပေါတော့တယျ။
“ဖိုးတုတျ နငျ လူမိုကျ ရုံတငျ မကတော့ဘူး လူလိမျ လူယုတျမာဖွဈနပွေီ…. ငါတို့ ဈေးရောငျးစား လာ တာ တဈသကျလုံး သူတဈပါး ပစ်စညျးကိုမလိမျမညာ ခဲ့ဘူး..နငျ့ ကမြှ တဈဈေး လုံး ဟိုးဟိုးကြျော ကလိမျ ဖိုးတုတျဖွဈနပေါလားဟဲ့” တဲ့ ။
တပညျ့တှေ ကို စုံစမျးခိုငျးကွညျ့တော့ ဟုတျသညျ ။
သိမျကွီးဈေး နဲ့ လသာ တဈဝိုကျမှာ ဖိုးတုတျ ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ ကုနျတှေ မှာပွီးနယျပို့ သတဲ့.. ပွီးတော့ ကုနျသညျတှေ ကို ပိုကျဆံ မရှငျးပဲ ဗွောငျလိမျသညျ ။ ကုနျသညျတှေ ခမြာ လညျး ဖိုးတုတျ ဆိုသညျ့ နာမညျကွား သညျနှငျ့ပငျ သှား မတောငျးရဲတော့ခြေ..။
ဖိုးတုတျ ဓါးဆှဲပွီး ဆငျးလာခဲ့သညျ……………….။ ………..အဲ့ဒီ ဖိုးတုတျ က ဘယျသူလဲ ။ ကွာကွာ မစုံစမျးရ..လမျးမတျော ဖိုးတုတျတော့ မဟုတျ လမျး(၃၀) ဖိုးတုတျ တဲ့ ပှဲစား ဖိုးတုတျလို့လဲ ချေါသတဲ့..။
လမျးမတျော ဖိုးတုတျ…..လမျး(၃၀) ဖိုးတုတျကွောငျ့ ဒေါသထှကျရပွီ..။
မကွာမီ……..ဖိုးတုတျ တပညျ့တှေ လကျထဲမှာ ယကျကနျယကျကနျ နဲ့ မူးနတေဲ့ လူတဈယောကျ ပါလာ ပါတော့တယျ..။
လမျးမတျော ဖိုးတုတျကို အထငျသေး သညျ့ အမူအယာဖွငျ့ လမျး(၃၀) ဖိုးတုတျက ကွညျ့လိုကျသညျ။
“ခငျဗြား..ဘယျသူလဲ..ကြုပျကို ဘယျသူမှတျ လို့ ဒီလိုချေါလာတာလဲ ..သခေငျြလို့လား”
လမျး(၃၀) က ဟောကျသညျ..လမျးမတျော က ရယျသညျ.။
“ကြုပျနာမညျ ဖိုးတုတျဗြ..ဖိုးတုတျ..ခငျဗြားကွားဖူးတယျ မှတျလား” လမျး(၃၀) က ထပျဟောကျသညျ။
“အေး မငျးက ဖိုးတုတျ ဆို ရော့..”
လမျးမတျော ဖိုးတုတျကိုငျနကြေ မူလီခေါငျးတပျ ကွိမျလုံးက လမျး(၃၀) ဖိုးတုတျ မကျြနှာပျေါ ကနျ့လနျ့ဖွတျ ကသြှားသညျ ။
“ခငျဗြား ဘယျသူလဲ..ကြုပျ အကွောငျး မသိသေးဘူး ထငျတယျ”
“အေး..မငျး ငါ့ကို သိက်ခာခြ တယျ..လူလိမျ..ခှေး”
“ကြုပျ အလုပျကြုပျ လုပျတာ ခငျဗြားကို ဘာသိက်ခာ ခနြလေို့လဲ”
လမျး(၃၀) ဖိုးတုတျကလညျး…….ပွနျ ခံပကျသညျ ။
“မအေ -ိုး………..ငါ လမျးမတျော ဖိုးတုတျ ကှ”
ဒီတော့မှ လမျး(၃၀) ဖိုးတုတျ ခေါငျးနပနျးကွီး သှားပါတော့တယျ……သှားပွီ သူ့ဘဝ..။
“မငျးလိမျ ထားတာတှေ (၃)ရကျ အတှငျး ပွနျပေး..မပေးရငျ………………”
လမျးမတျော ဖိုးတုတျ စကားမဆုံးလိုကျ သလို လမျး(၃၀) ဖိုးတုတျလညျး စကားပွောခှငျ့ မရလိုကျပါ.. မူလီခေါငျး တပျကွိမျလုံးက လမျး(၃၀) ဖိုးတုတျခေါငျးပျေါ အခကျြပေါငျးမြားစှာ ကရြောကျလာပါတော့ တယျ…………။
(၃)ရကျမွောကျနေ့ တှငျ လမျး(၃၀) ဖိုးတုတျ သညျ သူ့အိမျ ကိုရောငျးခပြွီး အကွှေးမြား ခြသှေားပါတော့ တယျ……….။
မူရငျးပိုငျရှငျအား Crd ပေးပါတယျ
ဘီလီယံနာ ဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အကြောင်း…..